सावधान ! माछा खाने गर्नु हुन्छ ? तेसो भए थाहापाउनुहोसमाछालाई लामो समयसम्म ताजा राख्न प्रयोग गरिन्छ घा’तक रसायन । – Yuwa Aawaj
बैसाख १०, २०७८ शुक्रबार 527
Prevएसिडिटी वा पेटमा ग्यास भरिने समस्या छ भने, यसरी अपनाउनुहो घरेलु उपचार बिधि !
Nextखाली पेटमा भूलेर पनि खानु हुदैन यि ७ चिज !
दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइँदै !